व्यवसायी साथीहरु स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहमत छन् | Sindhu Jwala
व्यवसायी साथीहरु स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहमत छन्
बेदबहादुर श्रेष्ठ (अध्यक्ष) सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघ
यतिबेला कोरोना भाईरसको संक्रण कारण मुलकभर चलेको लकडाउन अझै जारी छ । चैत्र ११ देखि जारी भएको लकडाउनले जिल्लाको आर्थिक अवस्था पनि चौपट्टै भएको छ । व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प रहेको छ । संक्रमण दिनानुदिन बढीरहको छ । तर जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले व्यापार व्यवसायलाई केही खुकुले बनाउने रणनीति ल्याएको छ । यो निर्णय संगै अबका दिनमा सिन्धुपाल्चोकमा व्यपार व्यवसाय कसरी सञ्चालन होला भनेर सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेदबहादुर श्रेष्ठसंग सिन्धुज्वालाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक
१) कोरोना माहामारीको कारण मुलक यतिबेला ठप्प अवस्थामा रहेको छ । यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
अहिले अवस्थामा कोरोना जिल्लामा मात्र होईन नेपालभर र विश्वमै फैलिएको अवस्था छ । तर पनि हामीले सिन्धुपाल्चोकमा अबका दिनमा कोरोना संक्रमण रहँदारहँदै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा केही सहजता ल्याउन पर्छ भनेर सुझाब दिएका छौं । लकडाउनले गर्दा सबै क्षेत्रमा असर परेको छ ।
२) मुलुक नै लकडाउनका कारण ठप्प रहेको अवस्थामा जिल्लाका उद्योगधन्दा कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसाय समेत ठप्प होलानी ?
निश्चयनै । खासगरी लकडाउन हुँदाहुँदै पनि निश्चित मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाब पहिला पनि थियो अहिले पनि छ । बिडम्बना भन्नुपर्दा कोरोनाको माहामारी नफैलदै सिन्धुपाल्चोकबाटै नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु हुन पुग्यो । यो घटनाले पनि सिन्धुपाल्चोकलाई निकै असर पु¥यायो ।
३) लामो समय सम्मको बन्दाबन्दीको कारण कयौं मजदुरहरुको अवस्था निकै नाजुक बनेको छ । यो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो ?
यहाँले भनेको जस्तै बन्दाबन्दीका कारण मजदुरहरु, साना व्यापारी व्यवसायीहरुको निकै नाजुक अवस्था बनेको छ । व्यवसायहरु समेत तहसनहस रहेको अवस्था छ । त्यसमा सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघको पनि नाजुक स्थिति छ । यसभन्दा अघि जुरे पहिरो, भूकम्प र भोटेकोशी बाढीपहिरोले ध्वस्त नै बनाएको सिन्धुपाल्चोक बिस्तारै तङग्रन लागेको थियो । त्यसमाथि कोरोना संक्रमण थपिए पछि झनै नाजुक भएको छ । त्यसकारण अहिले सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघले एउटा सहकार्य मात्र गर्ने काम भएको छ । यसको अलवा हामीले सुरक्षा निकायसंग सहकार्य गरेर जिल्लाका केही ठाउँहरुमा माक्स, सेनिटाईजर लगाएत स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका थियौं । त्यो भन्दा बढी गर्न सकेका छैनौं । त्यो भन्दा पहिला हामी साथीभाई मिलेर सहयोग गरेका थियौं । यतिबेला हामी सबै सुरक्षित बस्नुपर्ने भएको हुनाले व्यवसायी साथीहरु सबैजना सुरक्षित नै बस्नु भएको छ । जसमा मजदुर साथीहरुलाई चाँही धेरै गाह्रो भएकै छ । यसकारण हामीले पहिलाको स्थितिमा जस्तो काम गर्न सकेका छैनौं ।
४) ६ महिना भन्दा बढी लकडाउन भएसंगै बन्द रहेको व्यपार व्यवसाय सञ्चालनका लागि उद्योगवाणिज्य संघको तर्फबाट कुनै योजना बानाउनु भयो की ?
यो अवधिमा हामीले जिल्लामा सबैसंग सहकार्य गर्ने काम गरेका छौं । यहाँलाई थाहानै होला सिन्धुपाल्चोक बाढीपहिरो जोखिमको क्षेत्र हो । यहाँ ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसमाथि कोरोना माहामारी बढेकै छ । खासगरी सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघले अलि अलि कोष जम्मा गरेका थियौं । दशैंभन्दा अगाडि अलिकति खुकुलो भईसकेपछि बाढीपहिरोमा मृत्यु भएका परिवारको घाउमा मलम लगाउने हिसाबले केही राहत बाँढ्दै छौं ।
५) मंगलबार मात्रै जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति (डिसिसिएमसी) को बैठकले व्यापार व्यवसाय खोल्न केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको भन्ने सुनियो । यहाँ पनि बैठकमा उपस्थित हुनुभयो होला, खास बैठकले के निर्णय गरेको हो ?
मंगलबार जिल्लाका सरकारी प्रमुख देखि लिएर सरोकारवालाहरु र हामी उद्योग व्यवसायीहरु समेत जम्मा भएका थियौं । यतिलामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प रहँदा कसरी कर तिर्ने ? कसरी घरभाडा तिर्ने ? सबै सामाग्री बिग्रिन लागि सक्यो । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखि सबै कार्यालयका प्रमुख, अस्पताल देखि नगरपालिका प्रमुखहरु समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु सबैसमक्ष हाम्रा सबै बिषयमा बैठकमा कुरा उठाएका थियौं । बिहिबार बिहानदेखि ४ बजेसम्म बजार खोल्न पाउने जस्तै खाद्यन्न, फलफुल, हार्डवयर पसल लगाएत रहनेछन् । त्यस्तै रेडिमेट देखि जुत्तापसल सुनपसल, स्टेशनी लगाएतको ११ बजेदेखि ४ बजे सम्म खोल्ने प्रस्ताब राख्यौं । सोही अनुसार निर्णय भएको छ । यसको लागि सिडियो लगाएत बैठकमा उपस्थित सबै सरोकार निकायहरुलाई सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो निर्णय हामीले ३१ गते सम्मको लागि मात्र गरेका हौं । यो अवधिमा कोरोना माहामारी केही नियन्त्रण र सुधार भयो भने फेरी पनि उहाँहरुसंग बसेर व्यापार व्यवसायलाई अझै राम्रो बनाएर लैजाने भन्ने सोचमा हामी रहेका छौं । जसअनुसार हिजो सम्ममा चौतारा, बाह्रबिसे र मेलम्ची तीनवटै क्षेत्रमा उद्योगवाणिज्य संघको पहलमा व्यापारी व्यवसायीहरुसंग बसेर बैठकहरु सम्पन्न भईसकेका छन् । यसमा व्यवसायी साथीहरु स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहमत देखिएका छन् । सोही अनुसारको हामीले निर्णय गरेका छौं ।
६) त्यसो भय अब व्यवसायीहरुले व्यापार व्यवसाय सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न सक्छन् त ?
जसरी अहिले एकसाताको लागि भनेर खुकुलो बनाईएको छ । यो बीचमा कोरोना संक्रमण फैलिएन अलि सहज भयो भने यो भन्दा अझ राम्रो तरिकाले व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थि तगर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
७) नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिर आउन अब लगभग एकमहिना बाँकी छ त्यो बेला सम्म सिन्धुपाल्चोकमा व्यापार व्यवसायको कतिको सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
नेपालको मुटु भनेको राजधानी नै हो । राजधानीमा समेत बिहिबारबाट केही खुकुलो भएको अवस्थामा हाम्रो जिल्लामा पनि दशैं सम्ममा त्यस्तो अप्रिय नहोला भन्ने सोचेका छौं । जिल्ला छिर्ने मुख्य नाका बन्देउमा सुरक्षाकर्मीहरुले अलि कडाईका साथ चेकजाँच गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जति पनि जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । साँच्चै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कोरोना संक्रमित संख्या शून्य भयो भने हामी सिन्धुपाल्चोकबासी र देशभर नै नेपालीहरुको महान चाड उल्लासमय हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु ।
८) यतिबेला महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका तातोपानी बन्द रहेको अवस्था छ । यहाँ सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुको नाताले केही पहल भईरहेको छ की ?
यो नाका सिन्धुपाल्चोकको लागि मात्र नभएर चीन जोडिएको नेपालको पहिलो नाका हो । यहि नाकाबाट बिगतमा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरुले व्यापार गरेर नै आर्थिक रुपमा माथि उठ्नु भएको थियो । २०७२ सालको बिनासकारी भूकम्पमा बन्द भएको यो नाका २०७६ जेठ १६ बाट सञ्चालनमा आएको थियो । तर नेपालमा कोरोना माहामारीले यो नाका बन्द भएको छ । त्यसको साथसाथै बन्दको अवस्थामा पनि १०÷१२ वटा गाडी दिनमा आउने व्यवस्था मिलाई सकिएको थियो । फेरी पनि बर्षा लागे संगै बाढीपहिरोको चपेटामा तातोपानी क्षेत्र परेको छ । खासा माथि केरुङ ताल फुट्छ भन्ने सन्त्रास छाएको छ । हामी कामना गरौं त्यो ताल नफुटोस दशैंसम्म रोकिएका सामानहरु भित्र्याउन सकियोस र सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले काम गर्न सहज होस भन्ने कामना गर्न चाहान्छु । साथै केरुङ नाका पनि त्यस्तै अवस्था छ । नेपालीहरुको सामान हालिएको ९ महिना भईसक्यो त्यसको कुनै पहल भएको छैन् । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जानकारी गराईरहेका छौं । यो एकसाताको अवस्था हेरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग बसेर यि समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्छौ । यस सम्बन्धमा हामीले धेरैचोटी ज्ञापन पत्र बुझाई सकेका छौं । ज्ञापनपत्र बुझाएर मात्रै नहुने रहेछ, पहल गर्ने ठाउँबाट पहल भएन भने ज्ञापनपत्रको अर्थ नरहने रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु ।
९) आगमी दिन यस नाका सञ्चालनमा सुधार हुने कतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
आगमी एकमहिना पछि नेपालीहरुको ठूलो चाडपर्व आउँदै छ । यो अवस्थामा छिटो भन्दा छिटो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तथा राजदुत मार्फत, बाणिज्य दुतहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले नेपाली व्यापारीहरुको अड्किएको सामानहरु पठाउन पहल गरिदिनुभयो भने व्यवसाय गर्ने साथीहरुलाई निकै राम्रो हुनेथियो । साथै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरुले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुप¥यो । यसको लागि विशेषगरी रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
१०) अन्त्यमा यस मिडिया मार्फत यहाँको भनाई केही छ की ?
तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद । तपाईको मिडिया मार्फत सिन्धुपालचोक उद्योगवाणिज्य संघले केही गरेका कामहरुको आम जनतामा सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ । हाम्रा धारणा तथा सुभाब राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा तपाईको लोकप्रिय मिडिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बन्दै (फोटो फिचर सहित)
एमाले सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा अमृत बोहोरा
लिदी पहिरो प्रभावित परिवारका लागि नेपाली सेनाद्वारा ३१ आवास निर्माण